ချစ်ကြိုက်ခြင်းက သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့ နည်းလမ်း (၁၀)ချက် - Lifestyle Myanmar
ချစ်ကြိုက်ခြင်းက သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့ နည်းလမ်း (၁၀)ချက်
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သင်ချစ်နေတဲ့အခါ ရုပ်ပိုင်းကော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာနေတယ်လို့ ခံစားရရုံသာမက သင့်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း အခြားသူတွေဆီကနေ ချီးကျူးမှုတွေ ပိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင်စိတ်ကူးယဉ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တကယ် တောက်ပနေတာပါ။ ဒါတွေကတော့ အချစ်ကို ခံစားခြင်းဖြင့် သင့်အလှအပကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀)ခုပါ။ သင့်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးမျိုး မရှိသေးလို့ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ကြောင်းပြနိုင်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
၁။ သင့်ကို glowစေပါတယ်
အချစ်သစ်မှာ ရှိနေတဲ့အခါ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ တောက်ပနေတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါသလား?သင့်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာ သင့်ရဲ့BFF မဟုတ်ပါဘူး။ သင်က အချစ်ခံစားချက်ကို ခံစားရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အရေပြားကို သွေးပိုရောက်စေတဲ့အတွက် လည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်၊ မျက်နှာရှက်သွေးဖြန်းတာကို သင်ဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင့်အရေပြားဟာ extra blood တွေအားလုံးကနေ ကြည့်ကောင်းစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ ပိုမိုရရှိလို့ပါပဲ။
၂။ သင့်အားအချို့အရာတွေကို ပြုလုပ်စေပါတယ်
အချစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ အရင်ကထက် ပိုပြင်ဆင်တတ်လာတာကို သတိထားမိပါသလား? ပြီးတော့ အရပ်ပိုမြင့်အောင်လည်း လမ်းလျှောက်တတ်လာတယ်၊ Confidence ပိုရှိရှိနဲ့ စကားပြောတတ်လာနိုင်ပါတဘ်။ ဒါတွေအားလုံးက သင့်ကို အခြားသူတွေအား ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ချစ်တဲ့အခါ ကောင်လေးတွေက သင့်ကို ပိုပြီးအသည်းစွဲလာပုံရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ အီစထရိုဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်စေပါတယ်
orgasms ရရှိတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အီစထရိုဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်တင်းရင်းမှု၊ နုပျိုမှုနဲ့ အရေးအကြောင်း ကင်းစင်စေသော ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးစေပါတယ်။ ဒါက လုံးဝအခမဲ့ရတဲ့ စျေးကြီးသော collagen moisturizer လိုဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင့်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပါတယ်
ကျန်းမာတဲ့ အချစ်ရေးရှိခြင်းက သင့်ရဲ့ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်ကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလို အားကစားပိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ရတာက အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ချစ်သူရနေခြင်းက အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် အကြောင်းပြချက်တွေက တကယ်လက်တွေ့ဆန်ကြောင်း သုတေသနတစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အားကစားသမားအချို့ဟာ အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါ အိမ်မှာ အကူအညီ၊ ထောက်ခံမှု ပိုရခဲ့တာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ၎င်းက သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ် အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
၅။ အသားအရေကို သန့်ရှင်းစေပါတယ်
လိင်ဆက်ဆံမှုအတွင်း သင်ချွေးကောင်းကောင်းထွက်တဲ့အခါ ဒါက သင့်အသားအရေကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မွဲခြောက်ခြောက်နဲ့ ဝက်ခြံတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်။ Gym session တစ်ခုထက်ပိုကောင်းပါတယ်။
၆။ Oxytocin ကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်
သင်ချစ်ကြိုက်မိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အခါ သင့်ဦးနှောက်က သင့်ကိုစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အောက်ဆီတိုဇင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနပြုချက်အရ ၎င်းက သင့်စိတ်နေစိတ်ထားကို တိုးတတ်စေနိုင်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို အညွှန့်ချိုးပစ်နိုင်တယ်လို့ အကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ သင့်အသားအရည်က ကောင်းသင့်သလောက် မကောင််းဘူးဆိုတာ သင်သိတာကြောင့် ဒါက သင့်အသားအရေကို ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမှာ သေချာပါတယ်။
၇။ သင့်ဆံပင်တွေကို ဝဲနေစေပါတယ်
ပိုးသားလို နူးညံ့တဲ့ ဆံပင်လှလှလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား? သင့်မှာ ချစ်သူရှိရင် ၊ လိင်မှုရေးရာပုံမှန်ရှိရင် အရင်ကပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အီစထရိုဂျင်က သင့်ဆံပင်ကို ပိုလှပစေအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆံပင်ပိုထူလေ့ရှိတာပါ။
၈။ ငိုခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
အဆိပ်အတောက်ဆန်တဲ့ ကောင်လေးတွေကြောင့် သင်ဟာ ပုံမှန်ဝမ်းနည်းရတယ်၊ အများကြီးငိုနေရတယ်ဆိုရင် အသားအရောင်ဖျော့တာ ၊ ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်တာ အပါအဝင် အသားအရေဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ငိုခြင်းက နူးညံ့တဲ့မျက်လုံးဧရိယာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင်ချစ်ရသူနဲ့ ပျော်နေတဲ့အခါ ဒီဒရမ်မာတွေအားလုံး ကင်းပါတယ်၊ လှပတဲ့ အသားအရေကို ရယူပါ။
၉။ သင့်ကို ပိုပြုံးစေပါတယ်
သိပ္ပံက ဒါကို ထောက်ခံထားပါတယ်။ သန်မာတဲ့လူတွေရဲ့အပြုံးက သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာကို သုတေသီတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်ဟာ relationship သစ်တစ်ခုမှာ ခံစားချက်ကောင်းတွေရနေတဲ့အခါ အများကြီးပြုံးလေ့ရှိတဲ့အတွက် ဘာကိုမှ မလုပ်ရဘဲ သင့်အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ သင့်ရဲ့နာကျင်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်
နာတာရှည်ရှိသည်ဖြစ်စေ/မရှိသည်ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရရင် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးအသစ်ကနေ သက်သာမှုတစ်ချို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အချစ်က အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ခံစားမှု ပိုကောင်းစေပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ သူတို့ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါ နာကျင်မှုလျော့ပါးလာတာကို ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။